Furtuuwwan faankishinii LibreOffice Impreessiif
Qubannoo fi Hammamtaa
Agarsiisa islaayidii mul'isuu
Barruu Godayyaatti Taasisi
Furtuulee qaxxaamura agarsiisa islaayidii keessaa
Spacebar ykn xiyya Mirgaa ykn xiyya Gadii ykn Page Down ykn Enter ykn Deebisi ykn N
Galtee itti aanu taphadhu (yoo kamiyyuu, yookin islaayidii itti aanutti deemi)
Galteewwan osoo hin taphatin islaayidii itti aanutti deemi.
[lakkoofsa] + Enter
lakkoofsa islaayidii barreesitii Enter dhiibi gara islaayidii deemuuf.
Xiyya Bitaa ykn xiyya Olii ykn Page Up ykn Backspace ykn P
Galtee darbe deebi'iitii taphadhu. Yoo galteen darbe islaayidii kana irra hin jiraanne, islaayidii darbe agarsiisi.
Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii jalqabaatti utaali.
Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii dhumaatti utaali.
Gara islaayidii duraanii deemi.
Gara islaayidii itti aanuu dhaqi.
B ykn .
Dayeessoo gurraacha agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.
W ykn ,
Dayeessoo adii agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.
Furtuuwwan Qaxxaamuraa Mul'ata Baratamaa keessaa
Fuula foddaa keessatti taasisi.
filannoo ammee irratti faaran guddisi.
Wantoota filataman gurmeessi.
Garee filatame hin gurmeessin.
Gurmuu saagi, kanaaf wantoota kuphaa garee gulaaluu dandeessa. Gurmuun alatti cuqaasi mul'ata baratamaatti deebi'uuf.
Wantoota filataman walitti maki.
Wanta filatame addabaasi. Walmakiinsi kun kan hojjatu wantoota lama ykn bay'ee walitti makuun wanta uumame qofa irratti.
Wanta filatame ykn mul'ata fuulaa gara kallattii xiyyaatti siksi.
Gara naannoo mul'ata fuulatti siksi.
Shift + harksuu
deemsa wanta filatamee surdalaan ykn sarjaan jijjiira.
FilannooAlt fakkasuuf gadi qabi ykn wiirtuu gara alaa wantaa irraa harkisuudhaan wantoota hagamtaa jijjiiri.
Wanta wanta ammee filatame duuba jiruu fili.
Wanta wanta ammee filatame dura jiruu fili.
Wantoota ykn keewwata barruu walcinaa fili. jalqaba filannoo irratti cuqaasi, filannoo xumuraatti siksi, achiin Shift gadi qabi yommuu cuqaastu.
Shift+harkisuu (yommuu hammamtaa jijjiirtu)
Wantaa hammamtaa jijjiruuf kukkuta wantaa argachuuf yommuu harkistu Shift gadi qabi.
Wantoota tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.
Wantoota faallaa tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.
Haalata amme dhisi.Exit current mode.
Dhiheessa keessatti iddooqa (iddoo+qabduu)kakasi(yoo goodayyii filatame qofa).
Islaayidii irratti wanta barruu itti aanutti siksa.
Yoo wantoonni barruu islaayidii irra hin jirre, ykn yoo wanta barruu dhumaa qaqqabde, islaayidii haaraan islaayidii ammee booda sagama. Islayidii haaran akkuma islaayidii ammee teessuma walfakkaataa fayyadama.
Islaayidii itti duraatti jijjiiri. Islayidii jalqabaa irratti faankishinii hin qabu.
Islaayidii itti aanutti jijjiiri. Islayidii dhumaa irratti faankishinii hin qabu.
Impress $ (office name) keessatti furtuulee qaxxamuraa fayyadamuu
Title is: Furtuuwwan Qaxxaamuraa $[officename] Impreessiif